Qaraxyo Caaway Gilgilay Caasimada Kenya ee Nairobi | KEYDMEDIA ONLINE
Qaraxyo Caaway Gilgilay Caasimada Kenya ee Nairobi
Nairobi (Keydmedia) - Qaraxyo ka dhacay Daqiiqado kahor Bartamaha Caasimada Kenya ee Nairobi, gaar ahaana halka laga raaco Basaska ayaa lasoo sheegayaa iney ku dhinteen ugu yaraa 5 ruuux halka 20 kalana ay ku dhaawacmeen.
Ilo wareedyo ku dhaw dhaw booliska oo ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay oo ah Bosteejada Basaska Machakos ee bartamaha magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhimashada ay tahay haatan 5 Ruux.
Goob joogayaal ayaa u Wariyaha Keydmedia ee Nairobi in Qaraxa uu ahaa bambada gacanta laga tuuro, hase yeeshee wali lama hayo war rasmi ah oo kasoo baxay dowlada oo xaqiijinaya arrimahaasi.
“Waxaan arkay baabuur goynaya iyo qof wax ku tuuray kuwaasi oo qarxay, dad badan ayaa dhaaacmay, aniga waan ka badbaaday waxaana ku jiray badka la weeraray,” sidaa waxaa yiri Charles Njenga oo la hadlay Keydmedia English.
Waa weerarki ugu horeeyey oo noocaan oo kale ah oo ka dhaca caasimada Kenya tan iyo bishi October markaasi oo laba qarax oo bambooyin loo adeegsaday oo 24 saac gudahdood laga fuliyey Nairobi, weeraradaasi waxaa ku dhintay hal ruux 30-kalana dhaawac ayaa soo gaaray.
Wixii kusoo Kordha kala soco Keydmedia.net